wado - definition and meaning
"Gudoomiyaha Baarlamaanku waa aniga, waana haynayaa xilkan inta howsha guud ee baarlamaanka ay ka dhamaanayso" ayuu yiri Sh. Aadan Madoobe oo ku sugnaa Golaha Sh.cabka halkaasoo lagu wado inay ka furmaan fadhiyada baarlamaanka.
WADO Server support (included in the Web HTTP Server, url: wado)
Kulanka ayaa kusoo dhamaaday is-afgarad iyo jawi wanaagsan, iyadoo Sh. Sh.riif lagu wado inuu maalmaha soo socda kulamo la qaato xubno ka socda dalalka daneeya arimaha Somalia iyo xubno ka tirsan beesha Calaamka.
Dowlada Ghana ayaa sheegtay inay laba guuto oo ciidamo ah u dirayso Somalia, si ay u xoojiyaan nabad ilaaliyeyaasha Afrikaanka ah ee AMISOM, kuwaasoo lagu wado inay la wareegaan amaanka Somalia.
Wafdiga Sheekh Shariif ayaa waxaa ka mid ahaa Nuur Cadde iyo Axmed C / salaan, wuxuuna si toos ah u abaaray hotelka Kampisky oo uu ka dagan yahay dalka Jabuuti, halkaasoo lagu wado inuu kaga dhawaaqo ra'iisul wasaare Cusub.
Cabdiraxman Faroole ayaa wareysi uu siiyay Laanta Af-Soomaaliga VOA ku sheegay inuu dhaliil weyn u soo jeedinayo Ergayga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliya oo uu ku tilmaamay inuu qaab deg-deg ah u wado shirka kooxaha Soomaalida uga socda Djibouti.
"Hadii la sii wado dagaalada waxaa imaanaysa inay ciidamada Ethiopia sii joogaan dalka, marka waxaan u soo jeedinaynaa Al-shabaab iyo kooxaha la fikirka ah; inay dhowraan xabadjoojinta" ayuu mar kale yiri Sheekh C / qaadir Somow.
Police sources said the bullet which struck Prof Heyns broke intofour pieces, indicating that the copper jacket surrounding it wado "re the damage it caused.